शान्ती र संबिधानको चिन्ता - सिसाकलम ब्लग
शान्ती र संबिधानको चिन्ता
अन्तत फेरी शान्ती र संबिधानले पूर्णता पाउने लक्षणहरु धमाधम देखिन थालेका छन । यो लक्षणहरु प्रधानमन्त्री ज्युको शान्ती प्रकृया प्रतिको , संबिधान निर्माण प्रतिको चिन्ता बाट देखिएको हो । धन्य प्रधानमन्त्री ज्युको चिन्ता , जसले गर्दा यती सकारात्मक लक्षण हरु देखिन थालएका छन । अहिले देखिदै छ कसैको चिन्ताले कती धेरै मानिसलाई उत्साह जगाउछ । कसैको चिन्ताले कती धेरै मानिस मा आसा जगाउछ । साच्ची प्रधानमन्त्री ज्यु चिन्तित हुनुहुन्छ । सान्ती र संबिधान प्रती । त्यसैले त उहा कुनै पनि हालत मा सान्ती र संबिधान मा नकारात्मक प्रभाव पर्ने कुनै पनि कुरा गर्न गराउन चाहनु हुन्न । उहाले धेरै ठुला ठुला निर्णय गरेर र ठुला ठुला निर्णय नगरेर दुबइ तबरले शान्ती र संबिधानलाई भाडिन बाट बच्चाउनु भएको छ । त्यसैले अब छिटो छिटो संबिधान बन्ने लक्षणहरु देखिन थालएका छन ।
अस्ती मात्र केही उरन्ठ्यौला सभासद हरुले लडाकुहरुको पैसो माओवादीले कुम्ल्यायो भनेर संसदमा ठुलो होहल्ला मच्चाए । निश्चय पनि शान्ती र संबिधान को कुरा चलाउनु पर्ने संबिधानसभामा त्यती ठुलो होहल्ला हुनु निकै खतरापूर्ण कुरा थियो । यता मिडिया हरुले पनि लडाकुको पैसो माओवादीले खायो ! लडाकुको पैसो माओवादीले खायो भनेर मच्चाउनु सम्म खल्लिबल्ली मच्चाए । यसबाट प्रधानमन्त्री खुप चिन्तित हुनु भो । शान्ति प्रकृयालाई पुरा गर्नै लागेको बखतमा त्यत्रो ठुलो हल्ला मच्चाउदा शान्ती प्रकृया कहाँ पुग्छ होला ? त्यसैले उहाले अस्ती भर्खर सचेत गराउनु भयो - शान्ती शान्ती!! हल्ला नगर्नोस । हल्ला गरेसी अशान्ति हुन्छ । अशान्ती बढे पछी शान्ती बिथोलिन्छ ।
वाह !क्या काइदा बिचार । साच्चै विद्वान भनेका विद्वान नै हुन ।
प्रधानमन्त्री ज्यू शान्ती ल्याउन तल्लिन हुनुहुन्छ । त्यसैले उहा हल्ला रुचाउनु हुन्न । त्यसैले उहा जम्बो मन्त्री मन्डल बनाउनुहुन्छ तर सत्ता सझेदार दल हरुको कचकच रुचाउनु हुन्न । उहाले उहिल्यै हत्या आरोपी लाई मन्त्री बनाउनु भएको थियो । गर्ने ले जती बिरोध गरे पनि यो मुलुकमा शान्ती स्थापना गर्ने एउटा महत्वपूर्ण कडी थियो । किन भने हत्या आरोपीलाई मन्त्री बनाउदा एक त तिनी मन्त्रालय जान्थे र समाज मा रहदैन थिए त्यसो गर्दा समाजमा मानिसलाई उनको डर त्रास हुँदैन थियो । दिन दिनै तिनले बिताउछन कि भन्ने भयमा जनतालाई बाँच्नु पर्दैनथियो किन कि तिनी मन्त्रालयमै भुलिन्थे । अर्को कुरा मन्त्री भएसी अर्थात सत्तामा पुगेसी एकाएक मान्छे हरु बदलिन्छन र तिनका स्वाभाब हरु परिवर्तन हुन्छन । पहिले पहिलेका असल र प्रिय र लोकप्रिय नेता हरु सत्तामा पुगेसी एकाएक खराब र अलोकप्रिय बन्थे । यसै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्रिले खराब मान्छे लाई मन्त्री बनाउनु भयो । जसले गर्दा ति खराब मान्छे बदलिदा असल मान्छे बन्छन भन्ने उहाको मान्यता थियो । फेरी मन्त्री भएसी जहिल्यै सुरक्षाकर्मिको घेरा भित्र हुने गर्दछन । तेसो गर्दा उनी सधैं भरी प्रहरिको कब्जामा हुन्थे र फरार हुन पाउन्न थिए । तर पछी चारै तिर होहल्ला बढ्न थालए पछी । अशान्ति छायो र प्रधानमन्त्रीज्युले ति मन्त्रिलाई हटाउनु भयो । शान्ती कायम गर्न प्रधानमन्त्रीले लगाएको हत्या आरोपी मन्त्री नियुक्तिको तिरिक फेल खायो ।
प्रधानमन्त्री ज्यु खुब चिन्तित हुनुहुन्थ्यो समयमै संबिधान लेख्न सकिदैन कि भन्ने मा । उहा कुनै पनि हालतमा संबिधान लेख्न चाहनु हुन्थ्यो । यसको लागि चटारो पारी रहेको थियो त्यसै बेला हत्या आरोपी सभासद जेल हाल्ने फैसला सुनायो । उसै त संबिधान बनाउन यस्तो चटारो परीरा'बेला सभासद लाई कहाँ जेल पठाउनु ? सभासदलाई नै जेल पठाएर कस्ले लेख्ने संबिधान ? त्यसैले अपराधीलाई जेल नपठाएर भए पनि संबिधान त लेख्नै पर्‍यो । त्यसपछी उहाले सभासदज्यु लाई आममाफिको लागि राष्ट्रपती लाई सिफारिस गर्नु भयो ।
यसरी अहेले प्रधानमन्त्री ज्यु शान्ती र संबिधानको लागि सहि गलत केही नभनी दिनरात खटीइ रहनु भए छ । यही बेला मान्छे हरु नानाथरी कुरा गरेर उहालाई बिथोली रहेकाछन । कोही भन्छन भ्रस्टाचार भयो । कोही भन्छन महंगी बढ्यो । कोही भन्छन सुशासन भएन । कोही भन्छन अपराधीले संरक्षण पायो । कोही भन्छन जग्गा फेरी कब्जा भयो । कोही भन्छन अराजकता बढ्यो । वास्तव मा यो यस्तो झिना मसिना कुरामा अल्झिने समय होइन । यो त संबिधान बनाउने समय हो । संबिधान बनाउनु पर्छ । भ्रस्टाचार भयो भैरहोस । महंगी बढ्यो , बढी रहोस। अपराधी लाई कारबाही गरेर बरालिने समय छैन सरकारलाई । पैसा कुम्ल्याउनुले कुम्ल्याइ रहोस् छु मत्लब?
यि सबै कुराले थाहा हुन्छ । प्रधानमन्त्री ज्यु शान्ती र संबिधान मा तल्लिन हुनुन्छ । त्यसैले कसैले डिस्टर्ब नगर्नोस प्रधानमन्त्रीज्यु लाई उहा शान्ती र संबिधानको चिन्ताले साह्रै सताएको छ उहालाई !
.......त्यसैले अग्रिम शहिद घोषणा नगरे सम्म नेपाल ब...
मलाइ सहिद घोषणा गर्नु परो
गलबन्दी लगाएर फर्किने ?
२ रूप्पे पाम त !!
बढेसी बढ्यो बढ्यो !!
ज्यान जाला बनाउदिन
मलाइ आरजु को समर्थन छ !!
सभासदको लगानी र'च कि क्या हो ?
सुन्य सहनसिलता !!
पार्टीको नया ढाचा !!
बर्ड फ्लु !!
'सुनको फुल पार्ने कुखुरा' !!
छिटो भ ' छ !!
हिहिहा ..... अब छ मैना फेरी झ्याप !!